Welwelka Dhaqaale ee Yurub iyo Go'aanka Giriigga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Welwelka Dhaqaale ee Yurub iyo Go'aanka Giriigga
Go'aankii dawladda Giriigga iyo xaaladda dhaqaale
La cusbooneeyay onsdag 9 november 2011 kl 12.50
La daabacay tisdag 1 november 2011 kl 11.23
Go'aan xiiso dhaliyay ee uu ku dhawaaqay hogaamiyaha dalka Gariigga Giorgios Papandreou lana xiriiray in bulshada giriiggu u codeeyn doonaan haa ama maya go'aammada ey toddobaadkii ina dhaafay ku heshiiyeen hogaamiyeyaasha waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub iyo sidii looga taageeri lahaa dalkaasi in dhaqaalihiisa la badbaadiyo. Go'aanka ka soo yeerey Papandreou ayaa welwel dhaqaale ku abuuray suuqyada shamdadaha dhaqaale ee Yurub. Iyadoona laga cabsi qabo dhaqaalaha oo gala caqabad hor leh iyo shaqa la'aanta oo kor u sii kacda.
Go'aanka dawladda Giriiggu soo ban-dhigtay ayaa lama filaan noqdey iyadoona uu sababay in hoos u dhac uu ku yimaado shamdadaha suuqyada saamiyada dhaqaale ee Aasiya iyo Yurub. Shamdadda saamiga dhaqaalaha ee Istockholm ayaa hoos u dhacday kadib kolkii la furey 2%. Halka heshiiskii toddobaadkii hore ey gaareen hogaamiyeyaasha EU-da ey suuqyadu ka muujiyeen rajo wanaagsan ay isku bedeshay hoos u dhac iyo rajaxumo, sida uu sheegey Torbjörn Isaksson, ahna madaxa waaxda saadaalinta dhaqaalaha ee bangiga Nordea:
- Heshiisyada qaarkood ee toddobaadkii hore ey hogaamiyeyaashu gaareen ayaan illaa hadda caddeeyn, iyadoona uu iminka ku soo darsamey warkan ka soo yeeray hoggaanka dalka Griigga cirkana ku shareeray welwelkii dhaqaale.
Dalkan Iswiidhen ayaan xubin ka ahyan ururka lacagta waddammada ku midoobey Euro-oga, hase yeeshee la leh waddammadaa xiriir dhow ee dhaqaale, middaasina oo saameeyn dhankeeda ku yeelan doonta/karta. Sidoo kale isku xirnaanta bangiyada iyo kor u qaadidda dhaqaalahooda ayaa sidoo kale saameeyn dhaqaale dalkan ku yeelan karta. Torbjörn Isaksson iyo mar kale:
- Waa mid aad u sii kordhineeysa welwelka halka ay xaaladdu ku dambeeyn doonto. Iyadoona uu intaa ku daray in ay dhici karto in shirkadaha waaweyn ee dalkanana dhimaan shaqaalahooda. Waana mid iminkaba muuqata
Muhiimadda ka dambeeysa cod-qaadistan iyada oo weliba xaalad dhaqaale liidata lagu jiro ayuu sida ku macneeyay xildhibaan, dhaqaale yahan Leif Pagrotsky oo ka tirsan xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga, islamarkaana la taliye dhanka dhaqaalaha u ah hogaamiyaha dalka Giriigga Papandreou:
- Ma garan karo. Waxayse ila tahay in go'aankaa loo gaarey maadaama ey ula muuqatey in aanay la'aanteed codeeyntaasi suurtagal noqon lahyn heshiiskaa in la fuliyo. Inay adkaatay hoggaamintii dalka, hayaddii cashuuraha ayaa shaqa-joojin ku sugan, wasaaraddii dhaqaalaha ayey sidoo kale shaqaaleheedii xoog ku qabsadeen. Waana mid loo baahan yahay in shacabku aqbalaan go'aammadaa haddii la doonayo inuu si dhab ah u hir-galo ee aannu noqon amar dibadda uga yimid sida bulsho qaarkeed aaminsan yihiin.
Madaxa Dawladda Iswiidhen oo ka Hadlay Go'aanka Giriiga